Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo Labo Kulan La Ganaaxay – Radio Muqdisho
Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo weerarka uga ciyaara kooxda Real Madrid ayaa la dul dhigay labo kulan oo ganaax ah,ka dib markii uu kaarka casaanka ah qaatay ciyaartii ay sabtidii kooxdiisa 2-1 uga badisay kooxda Cordoba.
Ciyaaryahan Ronaldo ayaa dharbaaxay ciyaaryahan Jose Angel Crespo oo daafaca uga ciyaara kooxda Cordoba,halka uu darbo ku dhuftay ciyaaryahan Edimar.
Ciyaaryahan Ronaldo ayaa raali galin ka bixiyay qaladkii uu sameeyay.
Ciyaaryahan Ronaldo ayaa ka maqnaan doono labada kulan oo ay kooxdiisa Real Madrid la kala ciyaari doonto kooxaha Real Sociedad iyo Sevilla,waxana uu ciyaari doono kulanka ay kooxdiisu la ciyaari doonto kooxda Atletico Madrid.
Xiriirka kubadda cagta ee dalka Spain ayaa cadaadis lagu saaray in uu ganaax adag dul dhigo ciyaaryahan Cristiano Ronaldo.
Madaxweynaha Maamulka Puntland Oo Garoowe ku qaabilay Madaxa xafiiska Bankiga aduunka ee Soomaliya “Sawirro”
Madaxweynaha Maamulka Puntland Oo Garoowe ku qaabilay Madaxa xafiiska Bankiga aduunka ee Soomaliya "Sawirro"